Apụrụ iche ị ga-eju anya na Costa Rica | Akụkọ Njem
Unique ebe a ga-eju anya na Costa Rica
Amaara nke ọma na Costa Rica bụ paradaịs obibi obibi. Ekwuru na mgbe Christopher Columbus rutere Uvita Island na 1502, nke dị naanị kilomita atọ site na Puerto Limón, ọ tụrụ ya n'anya na ubi mkpụrụ osisi Costa Rican na-asọ oyi na ikekwe ọ bụ n'ihi nke a mere o jiri jiri aha a mee mba a.
Akụ na ụba nke Costa Rica bụ otu n'ime ebe kachasị mmasị maka ndị hụrụ ecotourism n'anya. Mmiri mmiri na-ekpo ọkụ ma dị ọcha nke Oké Osimiri Caribbean na-asa ya na n'ebe ọwụwa anyanwụ na Pacific Ocean n'akụkụ ọdịda anyanwụ, mba ahụ jupụtara na ebe ndị mara mma iji nwee obi ụtọ na okike n'ụdị ya dị ọcha. Lee ụfọdụ ndị ọkacha mmasị anyị.
1 Ogige Ntụrụndụ Tortuguero
2 Osimiri Celeste
3 Arenal na Irazú Volcano
4 Costa Rica, ebe kachasị elu maka sọọfụ
Tortuguero bụ otu n'ime ogige ntụrụndụ mba kachasị ama ama na Costa Rica. A na-akpọkwa ya 'obere Amazon' ebe a bụ isi ihe na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Nest nke nduru n’akụkụ osimiri bụ isi ihe kpatara ọtụtụ ji aga Tortuguero. Agbanyeghị, ọtụtụ anụmanụ ndị ọzọ bi na ogige a, dịka enwe enwe, frogs na iguanas na-acha akwụkwọ ndụ ma ọ bụ agụ iyi.
Kwa ụtụtụ ọ ga-ekwe omume iji anya abụọ gị hụ ha n'ụgbọ mmiri na-abanye n'ọwa mmiri na mangrove nke ogige ahụ. Na mgbakwunye, n’agbata ọnwa Julaị na Ọktọba, ọ nwere njem abalị nke ga-enyere gị aka ịhụ etu mbe si esi n’oké osimiri pụta wee gwupụta akwụ n’akụkụ osimiri iji dina akwa ha. n'ime otu ebe fọdụrụ n'ime ebe mgbaba mmiri nke ụwa.
Naanị awa anọ site na San José na Tenorio Volcano National Park, bụ Rio Celeste, ihe ịtụnanya nke asaa nke Costa Rica. Njem ebe a bu nchikota nke ihe omimi na iche echiche nke okike, nke mere na obu otu n’ime ihe nlere anya nke oma na mpaghara.
N'ime njem ahụ na Rio Celeste, Teñidero pụtara ìhè, ebe mmiri na-acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ. Ọzọkwa n'okporo ụzọ bụ Rio Celeste nsụda mmiri, nke mmiri ya na-agwụ na ọdọ mmiri ebe a na-ahapụ ịsa ahụ. N’ebe a, ị nwere ike ịnọtụ otu ebe na ebe izu ike, ige ntị n’olu mmiri nke osimiri na n’ọhịa n’onwe ya mgbe ị na-ahụ ọmarịcha gburugburu.
Arenal na Irazú Volcano
Otu n'ime ndị a bụ ugwu ugwu Arenal, nke a tụlere n'etiti ugwu 10 na-arụsi ọrụ ike n'ụwa site n'aka ndị ọkà mmụta sayensị ọ bụ ezie na ọ dịghị onye ga-ekwu otú ahụ site n'iche echiche udo na akwa blanket nke ikuku gbara gburugburu. El Arenal nwere ọdịdị ala abụọ dị iche iche: otu nke ahịhịa jupụtara na nke ọzọ jupụtara na lava na ájá na-esite na ntiwapụ mgbe niile.
Nnukwu mgbawa ikpeazụ nke ugwu Arenal mere na 1968 na isi iyi ya na-ekpo ọkụ ugbu a bụ otu n'ime ebe ndị kachasị mma na mpaghara ahụ, yana ala ya mara mma na ihe omume njem.
Ọzọ ugwu mgbawa na Costa Ruca bụ Irazú, nke kachasị elu na mba na ogologo oge nke mgbawa. Ọ dị n'ime Ogige Ugwu Irazú Volcano na akụ na ụba nke mpaghara echekwara dị iche iche, n'etiti ha Playa Hermosa, Isi na Diego de la Haya craters, yana ntọala Sapper, ebe kachasị elu nke massif na nke ị nwere ike ịlele Caribbean na Pacific nke Costa Rica
Costa Rica, ebe kachasị elu maka sọọfụ
Site na kilomita nke aja aja ọcha na nnukwu ebili mmiri, Costa Rica aghọwo otu n'ime ebe kachasị amasị ndị surfers na-eme egwuregwu a. A sị ka e kwuwe, a na-ahụta obodo a dịka ebe nke atọ kachasị ewu ewu maka sọfụfụ mgbe Hawaii na Indonesia maka oke osimiri na ebili mmiri ya.
Na mgbakwunye, ọtụtụ mmadụ na-eleta mba ahụ naanị ka ha nwee ebili mmiri dịka ihe a na-akpọ Salsa Brava, otu n'ime ndị kasị ibu na Costa Rica.
Oge mmiri ozuzo bụ oge ọkọchị na ọnwa ndị na-eso ya, yabụ, oge kachasị mma iji gaa Costa Rica ma rụọ ọrụ sọọfụ bụ mgbe ihu igwe na-akawanye njọ na ohere dị ukwuu nke ịchọta ebili mmiri dị mma, yana oke osimiri nwere mmadụ ole na ole. Montezuma, Pavones na Jaco bụ atọ kachasị mma osimiri Costa Rican maka sọọfụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Unique ebe a ga-eju anya na Costa Rica
Njem njem dị egwu na Suriname